Budata AppleXsoft File Recovery maka Mac
Budata AppleXsoft File Recovery
Ikpo okwu: Mac Asụsụ: Bekee
Free Budata maka Mac (16.01 MB)
Budata AppleXsoft File Recovery,
AppleXsoft File Iweghachite pụtara dị ka a keukwu faịlụ mgbake software na anyị nwere ike iji naghachi na mberede ma ọ bụ ụma ehichapụ faịlụ.
Dị ka a maara, nọnọdụ ụfọdụ, faịlụ nwere ike ihichapụ nihi teknuzu njehie. Ma ọ bụ onye ọrụ ma ọ bụ teknuzu, anyị nwere ike mfe mepụta mgbake usoro nke ehichapụ faịlụ site na iji AppleXsoft File Iweghachite omume.
Ojiji ebe nke AppleXsoft File Iweghachite;
diski ike mebiri emebi
Ngwa igwe eji emegharị ihe efu
Nhichapụ onye ọrụ butere
Okwu metụtara sistemụ arụmọrụ
Nihi interface ya dị mma, anyị nwere ike ịchọta ọrụ ọ bụla anyị na-achọ na ihuenyo ụlọ. Iji malite usoro ọchụchọ, anyị na-ebu ụzọ họrọ ngalaba anyị chọrọ ịchọ. diski ike, ngwa mgbasa ozi mbughari, ihe ncheta, kaadị SD na ngwaọrụ nchekwa data ndị ọzọ so na mpaghara anyị nwere ike ịchọ. Oge ọchụchọ dịgasị iche site na nha.
Sistemụ faịlụ na-akwado mmemme;
Iji usoro ihe omume, anyị nwere ike mgbalị naghachi photos, image faịlụ, akwụkwọ, akwụkwọ, ndetu, videos. Mmemme na-akwado usoro RAW.
Ọ bụrụ na ị na-achọ a keukwu faịlụ mgbake omume na ị nwere ike iji na gị Mac, AppleXsoft File Iweghachite ga-ihe karịrị izute gị na-atụ anya.
AppleXsoft File Recovery Ụdịdị
Ikpo okwu: Mac
Nha faịlụ: 16.01 MB
FIFA 22 bụ egwuregwu egwuregwu bọọlụ kachasị mma na PC na consoles. Malite na slogan Kwadoro site...